Ma iga caawin kartaa inaan ogaado qiyaasaha ugu muhiimsan ee muhiimka ah si aan si fiican ugu fiicnaado Amazon?
Waa kuwan qaar ka mid ah qalabka wax lagu qiyaaso ee muhiimka ah adigoo isticmaalaya waxqabadka loo isticmaalo si aad u hesho dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee shuruudaha raadinta iyo shuruudaha mudada dheer ee aad u baahan tahay adigoo adeegsanaya hannaanka wax soo saarka ee Amazon. Hoos waxaan kuugu soo socdaa inaad soo bandhigto aragti gaaban oo ku saabsan saddexda qalabka qiyaasaha ee muhiimka ah ee ugu muhiimsan ee aan helnay xalka ugu dambeeyay ee mar walba ku sii jiraya dusha sare ee Amazon ee raadinta badeecada oo leh liis wanaagsan oo soo-saarka ah. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, in sida horumarkaaga ee Amazon SEO kora, tartanka hore ee dhirta muhiimka ah xajiyaa sii kordhaya sidoo kale. Sidaa darteed, waa in aad marwalba xusuusnaataa inaad dhab ahaanti u haysato adoo dooranaya ballanka saxda ah ee ereyada muhiimka ah ee aad u socoto. Waxaan loola jeedaa in mararka qaar bilaabay maraakiib-joojin iyo ganacsiga ganacsiga ganacsi ayaa si toos ah u istcimaali kara istiraatiijiyad istiraatiijiyadeed oo si sax ah u ah shuruudaha raadinta ee leh tartan yar. Inay maskaxda ku hayaan, aynu ugu dambeeyntii ku dhex marno kuwan ugu dambeyntii qalabkii ugu muhiimsanaa ee lagu heli karo suuqa oo hadda jira - real estate appraisal training arizona. Google Analytics - dabcan, ikhtiyaarkan ma aha mid la og yahay inta badan annaga oo ah aaladda qiyaasaha keyword for Amazon. Si kastaba ha ahaatee, Google Analytics ayaa weli ah hab wanaagsan oo ah helitaanka aragti qaali ah oo ku saabsan ficilada muhiimka ah ee aad ku guulaysatay ilaa hadda. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad ogaatid in ay jiraan waxyaabo kale oo muhiim ah oo cusub oo calaamad cusub ah oo leh jaangooyo. Oo halkan waa marka goosanahan qalabka muhiimka ah ee keydka ah ee aduunka oo raadin weyn u leh gasho. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad weli cusub tahay, waxaan kugula talinaynaa inaad isku daydo Google Analytics marka hore iyo ugu horreyntii. Sidaa oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad si dhakhso ah u hubiso waxa hadda shaqeynaya si fiican, iyo waxa dhab ahaantii u baahan dib-u-eegis ama waa in laga yaabo in ay mar uun isbeddelaan.
2. KW Finder - qalabkan qiyaasaha muhiimka ah wuxuu la mid yahay kan hore (Google Analytics). Waxyaabaha ay tahay in KW Finder uu isku duwo qaabab aad u miisaaman oo caadi ahaan laga helo qalabyo badan oo software iyo qaababka online, tusaale ahaan Moz ama SEMRush. Aniga ahaan, waxaan helay KW Finder sidii khibrad aad u faa'iido leh. Waxaan aaminsanahay in aad sidoo kale u mahadcelin doonaa. Dabcan, adoo diyaar ah oo diyaar u ah inaad ku qaadato wakhti aad ku shaqeyneysid dhowr faylasha manhajka (tusaale ahaan, ereyada taban iyo / ama hadalo raadin dheeraad ah si aad u tixgeliso) si aad u sarayso waxqabadka guud ee liiska Amazon ee SEO. Ka dib oo dhan, qalabkan qiyaasaha muhiimka ah ayaa lagu heli karaa marin furan, sidaas darteed marnaba lagama rabo inaad bixiso xitaa hal diyaargarow si aad u isticmaasho nooca dufanka buuxa.
3. Ereyga muhiimka ah l - My ugu dambeeyey ee aan ku qeexay cilmi-baaris ku salaysan cilmi-baaris micno leh waa magac is-sharaxan. Oo si fudud ayaad uga heli kartaa bogga rasmiga ah ee cinwaankiisu yahay (keywordtool.io). Waxaa ka mid ah dhinacyadooda ugu xoogan, Qalabka Keyword Tool waxaa lagu taageeraa kow iyo toban luqadood oo kala duwan si ay kuugu siiyaan dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee muhiimka ah ee lagu guulaysto iyo jumladaha raadinta caansan ee loo yaqaan 'topo' search codes - sida ku dhowaad isku filan. Nidaamka aasaasiga ah (nasiib daro, Qalabka Keyword Pro wuxuu kuugu kacayaa wax ka badan 90 bucks bishii) waxaad si deg deg ah u heli kartaa qiyaasta raadinta qiyaasta, xaddigaaga hadda tartanka muhiimka ah, iyo sidoo kale waxyaabo badan oo faa'iido leh oo muhiim ah, tartamayaasha ugu dhow.